Burmese - Your liver your health translated - LiverWELL
Sections in Burmese
ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေဖို့အတွက် လက်တွေ့ကျသည့် အကြံပြုချက်များ
သင်၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စကားပြောခြင်း
သင်စားသောက်သည့်အရာအားလုံးနီးပါးသည် သင်၏အသည်းမှ ဖြတ်သွားသည်။ သင့်အရေပြားနှင့်ထိတွေ့သော ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် သင်ရှူသွင်းလိုက်သော အဆိပ်အတောက်များသည်ပင် သင့်အသည်းမှဖြတ်သွားသည်။ သင့်အသည်း၌ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အကောင်းဆုံး အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ထိန်းပေးသည့် အလုပ်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်နှစ်ခုမှာ သင်၏သွေးကိုသန့်ရှင်းစေပြီး အစာခြေခြင်းဖြင့်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသောအသည်းသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်း၊ ရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောအဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားခြင်းတို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်သည်။ ပျက်စီးသွားသောအသည်းသည် ဤအလုပ်များကို ကောင်းစွာမလုပ်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏အသည်းကို ကျန်းမာအောင်ထားရန်အရေးကြီးသည်။
၎င်းဘာသာပြုပြင်နိုင်ပြီး ကျန်းမာသော အသည်းတစ်သျှူးအသစ်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်
အသည်းဆဲလ်များသည် အဆီများကိုဖြိုခွဲပြီး စွမ်းအင်ထုတ်ပေးသည်
တစ်မိနစ်လျှင် သင့်သွေး ၁.၅ လီတာသည် သင့်အသည်းကို ဖြတ်၍စီးဆင်းသည်
အသည်းရောဂါသည် မည်သူမဆို ထိခိုက်နိုင်သည်
အသည်းရောဂါပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး လူကြီးများရော ကလေးများပါသက်ရောက်နိုင်သည်။ အသည်းပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ရှိသူများတွင် –
ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်များပြီး သို့မဟုတ် အဝလွန်ပြီး အသည်းအဆီရှိနေသူ
အသည်းရောင်ရောဂါ(ဘီ) သို့မဟုတ် အသည်းရောင်ရောဂါ(စီ)ကဲ့သို့ ရောဂါအမည်မတပ်ရသေးသော သို့မဟုတ် မကုသရသေးသော ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတစ်ခုရှိသူ
အသည်းရောင်ရောဂါဆိုသည်မှာအသည်းရောင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရောင်ရမ်းနေသောအသည်းသည် ကြီးလာနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖောင်းလာနိုင်သည်။ အသည်းရောင်ခြင်းအကြောင်းရင်းများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သော အသည်းရောင်အသားဝါ၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေး သို့မဟုတ် အဆီပါဝင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံအကြောင်းပြချက်များပေါင်းစပ်ရှိပေမည်။
ပျက်စီးသွားသောအသည်းသည် ရောဂါလက္ခဏာများ သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက္ခဏာများ ပြသခြင်းမရှိဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်တတ်သည်။ အမှန်မှာ အချို့အသည်းရောဂါ လက္ခဏာများမှာ သာမန် နာမကျန်းမှုနှင့်ဆင်တူသောကြောင့်
သတိမပြုမိဘဲ ဖြစ်သွားတတ်သည်။ အန္တရာယ်အကင်းဆုံးလုပ်ရပ်က သင့် နယ်မြေရှိ အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်(GP)၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူ၊ သူနာပြု (NP) သို့မဟုတ် အသည်းသူနာပြုတို့နှင့် အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုကို သင်စိုးရိမ်ပါက စကားပြောရန်ဖြစ်သည်-
အသည်း သို့မဟုတ် အထွေထွေဝမ်းဗိုက်ဧရိယာ၌ အထိမခံနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် နာကျင်ခြင်း
ဆီး ပုံမှန်မသွားခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲဆီးအရောင်ရင့်နေခြင်း
အာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်း (သို့) အနည်းငယ်မရေမရာဖြစ်ခြင်း။
အသည်းပျက်စီးမှု၏အကြောင်းရင်းကို သင် စောစောကုသလေ သင့် အသည်းကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးပိုများလေ ဖြစ်သည်။ သင်စိုးရိမ်ပူပန်နေပါက သင့်အသည်းကို စစ်ပေးရန် သင်၏ GP ကိုပြောပါ
များသောအားဖြင့် သင့်အသည်းမည်မျှကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပုံကို တိုင်းတာသည့် သွေးစစ်ဆေးမှုဖြင့် အသည်းစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်သည်။ ရလဒ်များက သင့် GP အား အခြားစစ်ဆေးမှုများ ရွေးချယ်နိုင်အောင် ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများမှာ –
သင်၏အသည်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း၏ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံကို တည်ဆောက်သည်
ဝမ်းဗိုက်/အသည်း အာထရာဆောင်းတစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ်ကို Medicare သက်သာခွင့်များအစီအစဉ် (MBS) က ကျခံပေးသည်။ အကယ်၍ သင်က Medicare ကတ်ပြားတစ်ခုကိုကိုင်ဆောင်ထားပါက ကုထုံး၏ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို သင့်အား ပြန်လည်ပေးလိမ့်မည်။
သင့်အသည်းပေါ်ရှိ ဒဏ်ရာကို ခန့်မှန်းနိုင်မည့် အထူးအာထရာဆောင်းစနစ်။
အများပြည်သူပြင်ပလူနာ အသည်းဆေးခန်းများမှတဆင့် FibroScan ကိုအခမဲ့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းများသည် FibroScan အတွက် ကျသင့်ငွေကောက်ခံနိုင်ပြီး Medicare မှတစ်ဆင့် ငွေပြန်ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
သင့်နယ်မြေရှိ GP၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူ၊ NP သို့မဟုတ် စိတ်ရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်က သတ်မှတ်ထားသော ဆေးဝါး(များ)ကိုသာသောက်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏထက်မပိုပါနှင့်။ သတ်မှတ်ထားသောဆေးများကို အရက်နှင့် / သို့မဟုတ် တရားမဝင်သောမူးယစ်စေသည့်အရာများနှင့် ရောနှောခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အချို့ဆေးများသည် ပမာဏမြင့်မားပါက သင့်အသည်းကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သည် (ဥပမာ ပါရာစီတမော)။
အရက်သောက်ခြင်းကို ကန့်သတ်ပါ သို့မဟုတ် ဖြတ်ပါ
ဆေးရွက်ကြီး သို့မဟုတ် ဆေးခြောက် သို့မဟုတ် အခြားမူးယစ်ဆေးများကို ရှောင်ပါ
စီးကရက်မီးခိုးတွင်ပါရှိသော အဆိပ်နှင့်ဓာတုပစ္စည်းများသည် သင်၏အသည်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဆေးခြောက်ပမာဏများပြားခြင်းသည် အသည်းအနာများကို တိုးပွားစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆေးလိပ် သို့မဟုတ် ဆေးခြောက်ကိုအသုံးပြုပါကအသည်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိသည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်သန့်ရှင်းသော ဆေးထိုးပစ္စည်းကိရိယာကို သုံးပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကြီးကြပ်မှုပေးနိုင်သော ဆေးထိုးခန်းသို့သွားပါ။ ဆေးထိုးပစ္စည်းကိရိယာများကို မည်သည့်အခါမှ မျှမသုံးပါနှင့်။
တက်တူးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင် အပေါက်ဖောက်ခြင်းကို သတိထားပါ
ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပြီး တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကို အသုံးပြုသည့်စတူဒီယိုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
လုံခြုံစိတ်ချရသော လိင်ဆက်ဆံခြင်းနည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးပါ
သားအိမ်လမ်းကြောင်း၊ ပါးစပ်နှင့်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ် ကွန်ဒုံးသုံးပါ။ ၎င်းသည် သင့်အားလိင်အင်္ဂါအရည်များမှ သို့မဟုတ် သွေးမှတစ်ဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
သွေးအစအနများ ရှိနေနိုင်သောပစ္စည်းများ (သွားတိုက်တံ၊ သင်တုန်းဓား) ကို မျှဝေအသုံးမပြုသင့်ပါ။ မြင်သာသည့် သွေးစွန်းနေသော ပစ္စည်းများကို အလုံပိတ်အိတ်ထဲတွင်ထည့်ပြီး အမှိုက်ပုံးထဲထည့်ပါ။
အချို့သောနိုင်ငံများသို့ခရီးသွားခြင်းသည် သင့်အား အသည်းရောင်ရောဂါ အေ နှင့်အသည်းရောင်ရောဂါ ဘီ၊ ငှက်ဖျားနှင့် အသားဝါရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်တိုးစေနိုင်သည်။ သင်၏ခရီးစဉ်အတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် ရေသန့်ဘူး သို့မဟုတ် ကျိုချက်ထားသောရေကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ GP ကိုပြောပါ၊
အရက်နှင့်ဆက်နွှယ်သောရောဂါ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချရန် ကျန်းမာသောအမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများသည် တစ်ပတ်လျှင်စံချိန် ၁၀ ခွက်ထက်ပို၍လည်းကောင်း၊ တစ်နေ့လျှင် စံချိန် ၄ ခွက်ထက်ပို၍လည်းကောင်း မသောက်သင့်ပါ။ သင်လျှော့သောက်လေလေ၊ အရက်နှင့်ပတ်သက်သော ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်နိမ့်လေလေဖြစ်သည် (NHMRC, 2020) ။
သင့်အသည်းဆဲလ်များကို အဆင့်ဆင့်ပျက်စီးစေနိုင်သော အသည်းရောဂါအမျိုးအစား များစွာရှိသည်။ အသည်းရောဂါကို စောစီးစွာသိရှိလျှင် စောစီးစွာကုသနိုင်သည်။ မကုသဘဲထားသော အသည်းရောဂါသည် အသည်း၏လုပ်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အသည်းပျက်စီးမှုဆီသို့ ဦးတည်နိုင်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု၊ အရက်၊ သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ် သို့မဟုတ် အဆိပ်အတောက် ပြဿနာများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရောင်ရမ်းခြင်း၏အကြောင်းရင်းကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ကုသခြင်းသည် ရောင်ရမ်းခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေပါမည်။
အမာရွတ်တစ်ရှူးများ ဖြစ်လာခြင်း။ ပုံမှန် ကျန်းမာသန်စွမ်းသောတစ်ရှူးနေရာကို ချိတ်ဆက်ထားသောတစ်ရှူး (ကော်လာဂျင်) ဖြင့်အစားထိုးသည်။ ဤအဆင့်မှာ အကြောင်းရင်းကို ဖယ်ရှားနိုင်လျှင် သို့မဟုတ် ကုသနိုင်လျှင် အမာရွတ်ဖြစ်နေသော အသည်းတစ်ရှူးသည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါသည်။
အသည်းခြောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကျန်းမာသောအသည်းတစ်ရှူးကို အမာရွတ်တစ်ရှူးဖြင့်အမြဲတမ်းအစားထိုးလိုက်သည့် ပြန်ပြောင်းလဲ၍မရနိုင်တော့သော အသည်းအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခြောက်သွားသောအသည်းသည် မာပြီး အဖုအထုံးဖြစ်ကာ ရံဖန်ရံခါအားဖြင့် အရွယ်အစားကျုံ့လေ့သည်။ အသည်းလုပ်ငန်းကို မကြာခဏ အကြီးအကျယ်ချို့ယွင်းစေသည်။ ကုသမှုက အသည်းပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး ကျန်ရှိသော ကျန်းမာသည့်အသည်းတစ်ရှူးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် အသည်းလုပ်ဆောင်မှုအချို့ကို ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည်။ အသည်းလုပ်ငန်းသည် အသည်းခြောက်ရောဂါတွင် မတည်မငြိမ်ပြောင်းလဲနေသည်။
အသည်းခြောက်ခြင်းက သင်၏အသည်းကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနိုင်ချေကို တိုးစေသည်။ အသည်းကင်ဆာကို စောစီးစွာတွေ့ရှိလျှင် အောင်အောင်မြင်မြင် ကုသနိုင်သည်။
အသည်းလုပ်ငန်းရပ်တန့်သွားသည့်အခါ အသည်းပျက်စီးသည်။ ၎င်းသည် အသက်အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုလိုအပ်သည်။ အသည်းအစားထိုးကုသမှုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်တွင်အသည်းနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများရှိပါက သင့်နယ်မြေရှိ GP သို့မဟုတ် NP နှင့်ဆွေးနွေးပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသူက သင်၏အသည်းလုပ်ဆောင်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခိုင်းနိုင်သည် သင်၏စစ်ဆေးမှုရလဒ်အပေါ်မူတည်၍ သင့်အား ဆေးဝါးများညွှန်းပေးနိုင်သည်။ ဆေးအများစုကို ဆေးဝါးအကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ် (PBS) မှ ကျခံပေးပါသည်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအများစုကို Medicare အကျိုးခံစားခွင့်များအစီအစဉ် (MBS) မှ ကျခံပေးပါသည်။ သင်၏ဒေသခံ GP သို့မဟုတ် NP သည် သင့်အားအသည်းအထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးထံသို့လည်း လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။
လက်တွေ့နှင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများအတွက် သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်စကားပြောပါ။ သူနာပြုများ၊ အကြံပေးများ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများ သို့မဟုတ် အာဟာရပညာရှင်များအပါအဝင် အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးသူများနှင့်လည်း စကားပြောဆိုနိုင်သည်။
အထွေထွေအချက်အလက်များနှင့် အထောက်အပံ့များအတွက် LiverLine ဖုန်း 1800 703 003 သို့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
သင်ဟာ အထီးကျန်သလိုခံစားရနိုင်တယ်။ ကုသမှုကြောင့် ပင်ပန်းသလို၊ အားနည်းသလို ခံစားရနိုင်တာကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖေးမကူညီမှုက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
– Grenville ၊ 56 နှစ်
ဒါဟာသူတို့ရဲ့သဘောထားပါပဲ။ ငါ့မှာရောဂါတစ်ခုရှိလာရင် ငါသွားချင်တယ် ငါပြောတာကို နားထောင်ပေးပြီး
– အသက် ၅၆ နှစ်ရှိဂျိမ်းစ်
အခမဲ့ဖြစ်ပြီး အမည်ဖော်ပြဖို့မလိုပါ။ လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များသည် သင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို နားထောင်ပေးပြီး နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပါမည်။ 1800 703 003 ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
LiverWELL အပ်ပလီကေးရှင်းသည် သင်၏အသည်းကျန်းမာရေးကို စီမံရန်ကူညီပေးသည့် လွယ်ကူစွာသုံးနိုင်သော မိုဘိုင်းအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အောက်ပါတို့အပါအဝင် သင့်အသည်းကို ကျန်းမာအောင်ကူညီပေးမည့် ကိရိယာများနှင့်အကြံဉာဏ်များစွာရှိသည်။
ဆေးစစ်ထားသည့် ရလဒ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ခြေရာခံခြင်း
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စွာ စားသောက်ခြင်း၊ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းနှင့် သတိနှင့်သောက်သုံးခြင်းအပါအဝင် အသည်းကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များကို LiverWell အက်ပ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်သည် ယေဘူယျသဘောသာဖြစ်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်အဖြစ်မရည်ရွယ်ပါ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက် အလက်များအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ NHMRC. (2020). အရက်ယမကာသောက်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန် ဩစတြေးလျလမ်းညွှန်ချက်များ။
ဤဗီဒီယိုသည်အစားအသောက်မှတဆင့် အသဲရောင်အသားဝါ B ပိုးကူးစက်နိုင်ကြောင်းယုံတမ်းစကားများကိုချေဖျက်ရန်နှင့် အမှန်တကယ်ကူးစက်နိုင်သည့် အကြောင်းရင်းများကိုတင်ပြထား ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်အောင်နေထိုင်ရန်နှင့် ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ဖော်ပြ
ဤဗီဒီယိုသည် မိခင်မှရင်သွေးသို့ အသဲရောင်အသားဝါ B ပိုးကူးစက် နိုင်ပုံနှင့် မည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ရင်သွေးသို့ရောဂါကူးစက်နိုင်ကြောင်း ယုံတမ်းစကားများကို ချေဖျက်ထားပြီး အမှန်တကယ်ကူးစက်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကိုတင်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင်
ဤဗီဒီယိုသည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် အသဲရောင်အသားဝါ B ပိုး ကူးစက်မှုကို မည်ကဲ့သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်အောင်နေထိုင်ရန်နှင့် ပုံမှန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဤဗီဒီယိုသည် အားကစားအတူလုပ်ခြင်းမှတဆင့် အသဲရောင်အသား ဝါ B ပိုးကူးစက်နိုင်ကြောင်းယုံတမ်းစကားများကို ချေဖျက်ရန်နှင့် အမှန်တကယ်ကူးစက်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများကိုဖော်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် အသဲရောင်အသားဝါ B ပိုးကိုစောစောကုသရန် အရေးကြီးကြောင်း အဓိကထားတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
သင့္ဆရာဝန္ကို ေမးရမည့္ ေမးခြန္း 12 ခု
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ